Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ Hogwarts Icons များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Top 20 LEGO set များနှင့်ပူးပေါင်းသည်
08 / 09 / 2021 08 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 213 Views စာ0မှတ်ချက် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်, ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်, 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု, Disney, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Lego, Lego Disney, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego Nintendo, Lego Star Wars, LEGO စတော့အိတ်သတိပေးချက်များ, Nintendo, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, ထိပ်တန်း LEGO အစုံအလင် 20
အသစ်ဖြန့်ချိ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု ပူးပေါင်းခဲ့သည် Brick FanaticsLEGO ထိပ်ဆုံး ၂၀ စာရင်း.
အဲဒါကတတိယမြောက်ဖြစ်စေတယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိရရှိနိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးအစုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏နိဂုံးချုပ်တွင်တိုက်ရိုက်စားသုံးသူအစုံ LEGO.com ယူကေမှာ၊ အတူ ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် နှင့် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alleyမရ။ ထိုသုံးစုံစလုံးသည် Wizarding World သို့ microscale, minifigure-scale နှင့်တည်ဆောက်နိုင်သောအရာများကဲ့သို့အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော entry point များပေးသည်။
ဒါကြောင့်သုံးယောက်လုံးကငါတို့ရဲ့နေရာကိုသိမ်းထားတုန်းဘဲ ထိပ်ဆုံး LEGO သတ်မှတ်ချက် 20 စာရင်းခဏတာတောင် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် အခုဆိုသုံးနှစ်ပြည့်တော့မယ်။ အဘယ်ကြောင့်ပို ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု မင်းရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံထိုက်တယ်၊ ငါတို့ကိုစစ်ဆေးပါ ရေးသားထားသောပြန်လည်သုံးသပ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကြည့်ရန်အောက်ပါကစားကိုနှိပ်ပါ။
၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု အဆင့်ခြောက်နေရာတွင်ဖြောင့်တန်းလာသည် ထိပ်တန်း 20သာနောက်ကွယ်မှ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ် နှင့် 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး.
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အပြည့်အစုံစစ်ဆေးရန် ထိပ်တန်း 20လက်ရှိတွင်ကုန်သေတ္တာတစ်လုံးတည်းသာပျောက်ဆုံးနေသည်။ 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြမရ။ မင်းအဲဒါကိုအရင်ရွေးချင်စိတ်ရှိရင် အငြိမ်းစားယူပုံရသည် ဤနှစ်ကုန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းပေးသွင်းပါ စတော့ရှယ်ယာသတိပေးချက်များ ပြန်လာရင်အော်ဒါမှာနိုင်မယ့်အချိန်ကိုငါတို့အကြောင်းကြားမယ်။
← Lego Creator 3-in-1 77940 တန်ခိုးကြီးဒိုင်နိုဆောများနှင့် 77941 တန်ခိုးကြီးဒိုင်နိုဆောများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
LEGO BrickLink Designer Program မှ Round3အစုံအတည်ပြုလိုက်သည် →